Baan Chuen Artsy homestay- Yabucala iibhedi ezi-3 ze-en-suite
Indawo yobugcisa ekwi-CBD, umgama wokuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kwaye kulula ukuyijonga idolophu ukusuka apha. Zininzi ezikufutshane iicafe, iindawo zokutyela, iimarike kunye neebha. Isakhiwo sinemigangatho emi-3 kuquka ivenkile yesipho kunye nestudiyo sobugcisa kumgangatho ophantsi, amagumbi ama-2 eendwendwe kumgangatho wokuqala kunye nommandla oqhelekileyo kumgangatho ophezulu. Le yindawo elungileyo yokunxibelelana nabantu basekhaya. Izaliswe ziincwadi, imidlalo yebhodi, ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla. Ukhenketho olukhokelwayo oluya kwimarike ekufutshane oyikhethileyo lunokulungiselelwa.
"Ubugcisa, banobungane, basekhaya, babodwa, badibana nabantu bendawo, iincwadi, imidlalo yebhodi" u-Baan Chuen ukuse (uhlobo) lwesakhiwo selifa lemveli kwidolophu yasePhitsanulok. Kumgangatho osezantsi, kukho ivenkile yezipho ethengisa izinto ezenziwe ngezandla zalapha ekhaya kunye nezinto eziqokelelweyo zakudala kunye nekhefi yokuzonwabisa, ndiyibiza 'indawo yokuqokelela' apho abantu banokuza basebenze kubugcisa babo kunye neeprojekthi zobugcisa. Kukho i-snack bar yokuzenzela, ukufikelela kweyure ezingama-24 kwaye simahla. Indawo yokutyela ikwalapha.
Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi amabini eendwendwe.
Kumgangatho ophezulu, ndiwubiza ngokuba 'yindawo yePicnic', yigalari yobugcisa, igumbi lokufunda kunye negumbi lokudlala lebhodi kwindawo enye. Unokufunda incwadi kwi-hammock, uthathe i-nap, wenze i-yoga okanye usebenze kwi-laptop yakho apho.
I-Clock Tower (indawo yasePhitsanulok) yimizuzu emi-3 kuphela yokuhamba. Zininzi iikhefi, iindawo zokutyela, iibhari, ukutya kwasesitalatweni, iivenkile ezifanelekileyo, iimarike ezintsha, indawo yokuhlamba impahla esetyenziswa ngemali yenkozo, ikliniki yamazinyo kunye nayo yonke into onokucinga ngayo kumgama wokuhamba.
Le ndawo ngumsebenzi wam ngoko ke ndiya kufumaneka ukuba ndibuze imibuzo ixesha elininzi.
Ndikwabamba imidlalo yebhodi ebusuku rhoqo ngooLwezihlanu kodwa ukuba uyayithanda imidlalo yebhodi, ndihlala ndiyilungiselela ngamaxesha am asimahla.
NgeCawe bubusuku bomboniso bhanyabhanya, sibonisa iimuvi ezizimeleyo/amaxwebhu wamkelekile ukuba uzibandakanye.
Ndikwabamba imidlalo yebhodi ebusuku rhoqo ngooLwezihlanu kodwa ukuba uyayithanda imi…